Serivisy ho an'ny mpanjifa ratsy indrindra: mpikambana ao amin'ny Star Alliance, Ethiopian Airlines sa Lufthansa?
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Serivisy ho an'ny mpanjifa ratsy indrindra: mpikambana ao amin'ny Star Alliance, Ethiopian Airlines sa Lufthansa?
Aprily 1, 2018
Ity dia fanomezam-boninahitra ny serivisy ho an'ny mpanjifa tena tsara voarain'ny ekipa natokana ho an'ny 1K ao amin'ny United Airlines. Mahagaga fa Skytrax tamin'ny 2013 dia nieritreritra fa tsara ny serivisy ho an'ny mpiasa ao amin'ny New Spirit of Africa, Ethiopian Airlines. Tena tsy manaiky aho. Manana torohevitra vitsivitsy aho, azafady, aza manandrana miantso ny ivon-toerana famandrihana fiaramanidina Ethiopian Airlines.
Rehefa avy nieritreritra ny serivisy ho an'ny mpanjifa fa tsy ho ratsy noho ny zavatra niainako tany Berlin tamin'ny volana lasa teo aorian'ny Eurowings, ny German Airlines, izay fananan'i Lufthansa dia namoy ny valiziny tamin'ny United Airlines tany Honolulu, misy Star Alliance Carrier hafa izay ao amin'ny liginy manokana. Homeko ny Etiopiana Airlines izao ny loka ambony indrindra amin'ny fikarakarana mpanjifa ratsy indrindra amin'ny indostrian'ny fiaramanidina.
Lufthansa koa dia ao amin'ny liginy manokana milaza hoe "tsy antsika io", fa Eurowings.
Na izany aza, ny Eurowings dia fananan'i Lufthansa 100% ary manompo ireo zotram-pialàn'i Lufthansa mivantana taloha. Ho an'ny mpanjifa toa ahy dia tena mitovy io. Lufthansa, Eurowings, Suisse, Austrian na Brussels Air - inona no maha samy hafa azy? I Lufthansa daholo ireo Star Alliance Airlines rehetra ireo, ankoatry ny filazan'ny Eurowings fa tsy anisan'ny fifanarahana. Ezaka sy lalao hamitahana ireo mpandeha fiaramanidina ary hanaronana fahalemena.
Ity no antony ahazoako ny loka voalohany amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ratsy dia izao ho an'ireo olona ao amin'ny ivon-toeran'ny mpiantso ny Ethiopian Airlines sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Ity zotram-piaramanidina ity dia mitanisa ny laharan-tolotra amerikana 800-445-2733 manaraka ho toy ny laharan-tariby ho an'ny mpanjifa sy ny famandrihana. Ny fiantsoana an'ity nomerao ity dia hampifandray anao amin'ny ivon-toeran'ny seranam-piaramanidina ao Addis Ababa.
Hanatrika ny fihaonana an-tampon'ny WTTC any Buenos Aires aho amin'ity volana ity amin'ity volana ity ary arahin'ny tsenan'ny Arabian Travel any Dubai. Mitana tapakila kilasy fandraharahana aho. Novidiko tamin'ny tapakilan'ny United Airlines ny tapakilam-piaramanidina etiopiana ahy. Voasoratra amin'ny sidina avy any Buenos Aires amin'ny alàlan'ny Addis Ababa mankany Dubai aho. Ny fisarahana ny sidina lavitra sy ny fitsangantsanganana kely any Addis Ababa dia toa nahaliana ahy avy amin'ny fomba fijerin'ny fizahantany.
United Airlines dia afaka nanova ny tapakilako mba hanehoana fijanonana 20 ora any Etiopia tsy misy sarany, saingy tsy afaka nanome valiny mazava ahy momba ny visa fitaterana ny kaompaniam-pitaterana raha takiana amin'ny fahatongavako.
Noho izany ny masoivohon'ny mpiantso foibe United Airlines 1K izay namindra ahy tao amin'ny Star Alliance Partner Ethiopian Airlines. Tena nanam-paharetana ny masoivohon'ny United Airlines ary nampahafantatra ahy isaky ny 5 minitra fa mbola mitazona ho an'ny Ethiopian Airlines izahay. Rehefa avy nanao izany nandritra ny in-10 mahery ary adiny iray taty aoriana dia niverina tamiko ny solontena United ary nilaza fa nampifandray azy fotsiny ny finday ny Ethiopian Airlines.
Nisaotra azy aho tamin'ny ezaka nataony ary andro iray taty aoriana dia nanandrana niantso ny Ethiopian Airlines aho. Nanindry ny 2 aho ho an'ny anglisy ary ny 2 ho an'ny kilasy fandraharahana ary nihaino ilay hira Etiopiana miverimberina hatrany hatrany nandritra ny adiny iray talohan'ny nanapahana ahy koa. Hafahafa taorian'ny nanindriako ny famantarana voalohany hilaza amin'ny rafitra fa mpikambana ato amin'ny Gold Star Alliance aho ary kilasy fandraharahana manidina, nilaza tamiko ny rafitra fa misy ZERO ao amin'ny Q ary ny fiandrasako dia 2 minitra na latsaka. Nanao izany isaky ny niantso aho.
Naveriko tamin'ny fomba samihafa io fizotran-javatra io nandritra ny andro maromaro ary farany dia nahazo maso ivoho avy amin'ny Ethiopian Airlines tamin'ny telefaona. Nilaza tamiko izy fa maty ny rafitry ny solosain'izy ireo ary hiantso azy ireo avy eo. Nangataka hiresaka amin'ny mpanara-maso iray aho ary tapaka. Saika nariako avy tao anaty fiara ny findaiko.
Nanandrana 2 andro hafa aho alohan'ny nahazoana masoivoho ET hafa. Nataony mandeha tsara ny rafitry ny solosainy. Nolazainy tamiko fa ny Ethiopian Airlines dia tsy maintsy mandamina ny visa fitaterana ahy. Rehefa nanontany aho hoe ahoana no hahombiazan'io dia napetrany tao amin'ny fihazonana 10 minitra hafa indray aho mba hilazana fa mila miverina miverina amin'ny fotoana hafa aho.
Oay! Mazava ho azy fa tsy mila mpizahatany i Etiopia fa tsy misy farafahakeliny farafaharatsiny mba hidiran'ny kaompaniam-pitantanana sy hitana ny maha-mpikambana azy ao amin'ny Star Alliance?
Ahoana ny fomba fiheveran'ny mpanjifa toy izany ny fenitra fiarovana sy fikojakojana ny zotram-piaramanidina toy izany? Tena mitady safidy hafa aho izao hanidina avy any Buenos Aires mankany Dubai.
Misy ny Emirates Airlines, fa ny kilasy fandraharahana dia telo heny noho ity mpitatitra ao Dubai ity. Miresaka resaka vola aho, saingy tsy tokony ho voaro kokoa noho ny miala tsiny ve aho?
Manontany tena fotsiny aho hoe ahoana ny fanekena ny Ethiopian Airlines tamin'ny taona 2013 miaraka amin'ny lokan'ny serivisy ho an'ny mpiasa Skytrax? Angamba ny fizotran'ny fitsarana Skytrax dia mety ho mendrika hanaovana fikarohana.
Tena homeko ny loka ho an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ambony indrindra amin'ny masoivohon'ny United Airlines 1K izay niara-nipetraka tamiko nandritra ny adiny iray mahery tamin'ny telefaona. Homeko ny mari-pankasitrahana ny masoivohon'ny departemantan'ny entana 1K hanolotra azy ireo hiatrika ny Eurowings ary hanodinana ny fangatahako famerenam-bola ary hampandroso ny vola tokony ho azoko tamin'ny Eurowings.
[contact-form] [contact-field label = "anarana" type = "anarana" ilaina = "true" /] [contact-field label = "Email" type = "email" ilaina = "true" /] [contact- label = "Website" type = "url" /] [contact-field label = "Message" type = "textarea" /] [/ contact-form]